WWE News: John Cena no mpanohitra an'i WrestleMania 32 tany am-boalohany - Wwe
WWE News: John Cena no mpanohitra an'i WrestleMania 32 tany am-boalohany
Isan-taona, toy ny WrestleMania mihodina ny vanim-potoana, betsaka ny tombantombana momba izay hiatrika ny Undertaker. Ny Undertaker dia lasa mitovy dika amin'ny WrestleMania satria ny lozisiny dia mitazona lanja lehibe amin'ny tantaran'ny fialamboly ara-panatanjahantena. Tamin'ity taona ity koa, be ny tsaho miely momba ny mombamomba ilay olona mitondra ny The Deadman.
Ny iray amin'ireo anarana malaza nipoitra dia John Cena. Na dia efa ampahany tsy tapaka tamin'ny lisitra nandritra ny folo taona aza izy roa, dia zara raha nifampiresaka izy roa tamin'ny fifanandrinana lehibe. Lalao iray at WrestleMania teo anelanelan'ny roa dia azo antoka fa nanangona fifantohana betsaka ary mety ho lalao tadidy. Ireny no tena drafitra namelomana ny famoronana WWE WrestleMania 32.
Bryan Alvarez ny Gazety mpanara-maso Wrestling nitatitra fa ny mpanohitra an'i Undertaker tany am-boalohany ho an'i WrestleMania 32 dia tokony ho i John Cena. Alvarez dia nitondra ny lohahevitra raha mbola niresaka ny olan'ny mety amin'ny lalao Brock Lesnar vs. Shane McMahon izay honohono fa ao anaty sanganasa. Nasongadiny fa ny ratra teo amin'ny sorok'i Cena no tena antony nanosika ny lalao. Hoy izy:
Tsy afaka mino aho fa hanao [Shane McMahon vs. Brock Lesnar] ry zareo. Tsy azoko fotsiny hoe maninona ianao no mandany lalao Brock Lesnar ao amin'i Shane McMahon. Ny lalao Shane vs. Undertaker dia drafitra fihemorana taorian'ny nandratra an'i John Cena ary tsy nanana olon-kafa ho an'ny The Undertaker izy ireo.
Na dia lalao nifanandrinan'i Undertaker sy Shane aza dia lalao tsara feno toerana tsara, tsy nifanaraka tamin'ny sasany tamin'ny Phenom's WrestleMania fifandonana. Taorian'ilay lalao dia toa nilaza tamin'i Vince i Taker fa vita ny azy. Nanomboka teo dia tsy nipoitra tamin'ny fahitalavitra WWE i Undertaker. Nasaina niseho vitsivitsy ihany koa izy tamin'ny hetsika mivantana vitsivitsy taorian'izay WrestleMania 32 , saingy taty aoriana dia nesorina tamin'ireo seho ireo izy tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo, izay nahatonga ny maro hieritreritra fa misy hafanana eo anelanelan'ny The Phenom sy ny filohan'ny WWE.
Ny antony iray hafa dia satria i Vince dia nangataka tamin'i Undertaker hiasa amin'ny zanany lahy, izay tsy nanaovan'i Deadman mafy hevitra.
Cena kosa dia niseho tokoa tamin'ny WrestleMania 32 ary nanampy ny Rock handresy ny fandrahonan'ny fianakavian'i Wyatt. Tsy nahavita zavatra firy izy nandritra ny fizarana, na izany aza, satria mbola tsy nodiovina ara-pahasalamana izy mba hitolona.
ahoana no ahalalanao ny tapany
I Cena sy i Undertaker dia samy tsy ao anaty programa WWE intsony izao. Cena dia nivoaka nitifitra ny vanim-potoana faharoa tamin'ny seho tena izy Grit Amerikanina. Taker dia honohono fa hiverina hatramin'ny nanoratan'ny WWE azy ho iray amin'ireo masoivoho maimaim-poana indrindra miaraka amin'ny Rock manaraka ny fizarazaran'ilay marika. Raha hiverina izy, dia natoraly ho azy ny fananganana azy amin'ny marika manga hiady amin'i Cena. Ankoatr'izay, i Undertaker dia nantsoina Smack down nandritra ny fizarana marika voalohany tamin'ny 2002.
Mety hiverina amin'ny faran'ny taona i Cena fa tsy azo antoka hoe iza no hifandramany amin'ny manaraka. Mety hahazo lalao eo amin'ny Leader of the Cenation sy ilay Deadman fotsiny isika amin'ny WrestleMania 33 fa amin'izao fotoana izao, tsy afaka maminavina fotsiny isika.
teny azonao ampiasaina hilazana ny tenanao
zavatra tsara hatao ho an'ny sipanao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
rahoviana no hijanona tsy milalao mafy hahazoana